Faah faahin kasoo baxeysa Dagaal ka dhacay Magaalada Marka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faah faahin kasoo baxeysa Dagaal ka dhacay Magaalada Marka
Ardaan Yare 30 August 2018
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo xalay ka dhacay gudaha Magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalka ayaa waxa oo u dhaxeeyay Ciidamada dowlada Federaalka Soomaaliya iyo dagaalyahano ka tirsan Al Shabaab,kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,waxaana dagaalka ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac.
Dadka Deegaanka Magaalada Marka ayaa inoo sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii dagaalyahano hubeysan oo ka tirsal Al Shabaab ay weerar ku qaadeen Magaalada,isla markaana uu bilowday dagaal aad u xoogan.
Ugu yaraan Saddex qof ayaa ku geeriyootay dagaalkii xalay ka dhacay Marka,halka dhaawac uu kasoo gaaray tiro intaas ka badan.
Guddoomiyaha Marka Xasan Macallin Cumar ayaa waxa uu sheegay in Ciidamada dowlada ay iska caabiyeen weerarkii Al Shabaab ay ku qaadeen,waxaana xaalada Magaalada maanta ay tahay mid degan.
Deg Deg:-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo Muqdisho soo gaaray
Darawal Mooto Bajaaj oo toogasho lagu dilay Magaalada Muqdisho